Umengwụ Ibu Ibu Social bọtịnụ na Socialite.js | Martech Zone
Taa, enwere m ezigbo ụbọchị na ndị ọrụ weebụ na ndepụta Angie. Ndepụta Angie na-emepe saịtị ha ka ọ bụrụ ọba akwụkwọ ọgụgụ dị ịtụnanya… yana oge niile ha gara n'ihu na-eme ka saịtị ha dị ngwa. Ibe ha na-ebu ibu na ọsọ ọsọ. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị m, bulie ibe a na Garage ụzọ.
Peeji ahụ webatara onyonyo, vidiyo, na bọtịnụ mmekọrịta mmadụ… ma ka na-ebu ibu na milliseconds. Tụle saịtị ha na nke m dị ka ịgba ọsọ Prius na F-16. Emebeghị ha, ma, na-achọ mgbe niile ụzọ iji melite ahụmịhe ndị ahịa ma nweta ọdịnaya achọtara na ịkekọrịta.
Anyị enweghị ndị otu ọrụ mmepe oge niile ma ọ bụ akụ nke ụlọ ọrụ ọha na eze, yabụ ọganihu anyị dị nwayọ nwayọ karịa Ndepụta Angie. Anyị nwere nnabata dị egwu Flywheel - na-eji caching ha dị elu na CDN, mana anyị maara na a ka nwere ụfọdụ ihe na-ewute anyị. Iji maa atụ, onyonyo anyị anaghị arụ ọrụ nke ọma. Enwere ọrụ dị ebe ahụ na ị nwere ike ịgbanwe ihe onyonyo gị na obere akụkụ nke nha ha ma na-eme ka nghọta ha doo anya… anyị na-ele ha anya.
Ka m na egosiputa ha saiti anyi, m kporo nku ma kobe isi m dika ihu akwukwo juru mgbe m na-etinye bọtịnụ ọha. Echere m na ọ bụ Facebook. Pịa… otu nke abụọ ma ọ bụ abụọ mgbe e mesịrị bọtịnụ pụtara na peeji nke ọzọ jupụtara. Ug.
Mgbe m kọwaara ya nsogbu ahụ, injinia ha zara ya ozugbo, mmekọrịta.js. Socialite na-enye ụzọ dị mfe iji mejuputa ma rụọ ọrụ plethora nke bọtịnụ nkekọrịta mmekọrịta - oge ọ bụla ịchọrọ. Na mpempe akwụkwọ, na edemede hover, na ihe omume ọ bụla! Ebe ọ bụ na ndị na-elekọta mmadụ na-eburu bọtịnụ ndị ahụ asynchronously, akwụkwọ ahụ agaghị akwụgidere mgbe ha na-echere 50kb nke mgbasa ozi mmekọrịta.
Obi dị m ụtọ, enweelarị mgbakwunye WordPress nke na-etinye Socialite, akpọ WPsocialite. N'abalị a, amalitere m koodu m ahaziri maka itinye bọtịnụ ma mejuputa WPSocialite. Enwere m ike ịhazi CSS ma gbanwee bọtịnụ m chọrọ. Ana m atụ anya ka agbakwunye bọtịnụ ndị ọzọ n'ọdịnihu - dị ka Buffer ma ọ bụ Reddit… mana nke a zuru oke maka ugbu a!